Ao amin'ny fanompoam-pivavahana ankehitriny tontolo iainana, ny teknolojia maso dia lasa iray amin'ireo tena ilaina fomba anjara fiangonana. Araka ny LED manohy mampiseho kokoa takatry ny, trano fivavahana maro manerana ny firenena no fampidirana am-piangonana LED mampiseho ao an-pivavahana vokatra ho fitaovana mba hifandraisana hafatra, ny vaovao, ny fivavahana sy ny maro hafa.
Rehefa manohy ny mahita fiangonana fitomboana, nitondra lasa ny handeha-ny vahaolana mba hampielezana ny hafatra na anatiny sy ivelany. Na ianao mila fiangonana LED manda mba haneho hira sy toriteny tononkira hevitra, na ny amoron-dalana nomerika LED haneho famantarana ny filazana ho an'izay mandalo, LED mampiseho ny zava-takatry, fomba mahomby ho an'ny fiangonana ny mifampiresaka
Ny maha LED hilefitra Asehoy ny kobany dia mamela ny fiangonana ekipa mpamokatra ho mora foana sy nanova ny fandaharana ny fampisehoana mba freshen ny fijery ny sehatra. Miaraka LED mampiseho, mitandrina ny fijery sy ny mihevitra ny fiangonana vaovao ny sehatra famolavolana Tsy mbola mora kokoa na mahomby kokoa. Ny manovaova ny LED mampiseho any am-piangonana mamela anao handamina ny sary amin'ny fomba isan-karazany; dia afaka hametraka ny mampiseho ny mifanolotra mba hamoronana lehibe, miray volo fampisehoana na afaka haeliko ny mampiseho manerana ny sehatra hanampy lalina sy ny lafiny izay tsy mety ho tratra amin'ny projection na mpanaramaso hafa. Ankoatra izany, dia lavitra LED mamirapiratra ary mitaky ny antsasaky ny herin'ny fampisehoana hafa vokatra, izay niafara tamin'ny tahiry ao amin'ny fiangonana utility fandaniana.
Ny ekipa varotra ara-teknika dia vonona ny hanampy maromaro ny asa fanompoana amin'ny fiangonana tonga lafatra LED miseho vahaolana izay mendrika ny fahitana sy ny teti-bola. Avy amin'ny voalohany ka hatramin'ny farany, dia afaka matoky fa ny ekipa hitari-dalana anao amin'ny alalan'ny dingana rehetra ny dingana
Radiant nitondra manome miray volo lehibe-format LED mampiseho amin'ny fanapahan-kevitra isan-karazany, manome tsipiriany mazava sy sary mampiseho. Fitandremana ny andian-dahatsoratra vaovao toriteny dia fanalahidin 'ny fitandremana ny fiangonana niverina. Ny rindrina LED manolotra anao ny fahalalahana reconfigure betsaka araka izay te-mendrika ny hafatra. Na mitady haneho lahatsary, hira lyrics, na velona IMAG lahatsary, LED Video mampiseho manampy tetikasa ny hafatra amin'ny fomba tsy hay hadinoina.